Iindaba - Bhabha
Bhabha, (odola iDiptera), naliphi na inani elikhulu le- izinambuzane ephawulwa ngokusetyenziswa kwamaphiko amabini okubhabha kunye nokuncitshiswa kwesibini samaphiko ukuya kumaqhina (abizwa ngokuba ziihaltere) asetyenziselwa ukulinganisa. Igama elithile bhabha isetyenziswa kakhulu phantse kuso nasiphi na isinambuzane esincinci esiphaphayo. Nangona kunjalo, kwi-entomology igama libhekisa ngokukodwa kwi-125,000 yeentlobo zeedipterans, okanye iimpukane "eziyinyani", ezisasazwa kwihlabathi liphela, kubandakanya ne-subarctic kunye neentaba eziphakamileyo.
IiDipterans zaziwa ngamagama aqhelekileyo anje ngee gants, midges, iingcongconi ,, kunye nabavukuzi bamagqabi, ukongeza kwiintlobo ezininzi zeempukane, kubandakanya ukubhabha kwehashe, ukubhabha kwendlu, ukubhabha iimpukane, kunye neziqhamo, iinyosi, umphangi, kunye neempukane ze crane. Ezinye iindidi zezinambuzane zibizwa ngokuba ziimpukane (umzekelo, oonombombiya, oonokrwece, nooMabhabhane ), kodwa izakhiwo zazo zamaphiko zinceda ukwahlula kwiimpukane eziyinyani. Iindidi ezininzi zedipterans zibaluleke kakhulu kuqoqosho, kwaye ezinye, ezinje ngendlu eqhelekileyo kunye neengcongconi ezithile, zibalulekile njengabathwali besifo. Yabona dipteran.
Ehlotyeni, zininzi iimpukane nezinye izinambuzane ezibhabhayo efama. Kukwakho nezinambuzane ezininzi ezifama. Amachaphaza ezinambuzane ayingxaki kwezolimo. Eyona nto icaphukisayo kwezi zinambuzane yimpukane. Iimpukane aziyongxaki kumafama kuphela, ziyabacaphukisa abantu abaqhelekileyo.Iindiza zingahambisa iintlobo ezingama-50 zezifo kunye nezifo ezibalulekileyo ezichaphazela ukufuya imfuyo kunye neenkukhu, ezinje ngomkhuhlane weentaka, isifo seNewcastle, isifo samanqina, ihagu umkhuhlane, ipychychlorobacellosis yeentaka, i-avian colibacillosis, i-coccidiosis, njl. Imililo ingasasaza izifo ezahlukeneyo zabantu, isoyikisa impilo yabasebenzi.
Ke kufuneka benze ntoni abalimi ngeempukane?
1. Ulawulo lomzimba
Ukuthintela kunye nokulawula imfuyo kunye neendawo zokufuya iinkukhu kukucoca ilindle kwangexesha, ngakumbi jonga kwikona efileyo yelindle kunye nelindle. Inkunkuma yezilwanyana kufuneka yome kangangoko. Ukufuywa kwemfuyo kunye neenkukhu inkunkuma yasefama, imfuyo egulayo kunye nekhubazekileyo kunye neenkukhu kufuneka ziphathwe ngexesha, ukusuka kumthombo wokuphelisa okanye ukunciphisa indawo yokuzalela iingcongconi kunye neempukane.
2. Ulawulo lwebhayoloji
Ulawulo lwebhayoloji lweengcongconi kunye neempukane kukuhlakulela iintshaba zendalo kwilindle. Iintshaba zendalo zemiyane zibandakanya oonombombiya kunye noonomeva begecko. Kwiimeko zendalo, phantse akukho zintshaba zendalo zeengcongconi kunye neempukane kwilindle, kwaye ilindle lezilwanyana elomileyo lilungele ukukhula kweentshaba zendalo zeengcongconi kunye neempukane.Nangona ezi ndlela zingazibulala iimpukane ngexeshana nje elingephi, azinako ukuziphelisa ngokupheleleyo iimpukane. Ukuba ufuna ukulahla iimpukane, kufuneka uthembele kwindlela yesayensi.Imigibe yeempukane yamva nje yazalwa yangeniswa eJamani. Isiqingatha seyure emva kokuvula amandla, zonke iimpukane egumbini zanyamalala, le yeyona ndlela yesayensi yokuphelisa iimpukane, ezona zilula!Lo mbulali mbumbulu yintsomi yentengiso, kwaye ngaphezulu kwe-100, 000 lamakhaya ayayisebenzisa. Le yimveliso ebalaseleyo ebamba ngokuzenzekelayo iimpukane! Zilungele iifama, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, iimarike zokutya, indawo yokulungisa ukutya kunye neefama nakwezinye iindawo.Iimpukane zinevumba elibi leswekile, iviniga, iammonia kunye nentlanzi. Xa iimpukane zifunxa isithiyelo, ziya kuqhutyelwa kumgibe weempukane ngokujikeleza kwepleyiti ejikelezayo.